နအေိမြ LOTTE ဟိုတယ်ဘွတ်ကာကလပ်
Lotte Hotels & Resorts Lotte Hotel ဘွတ်ကာ ကလပ် အစီအစဉ် (ဤမှစ၍ “ဤအစီအစဉ်” ဟုခေါ်ဆိုမည်) မှ အထူးဝန်ဆောင်မှုများ၊ အထူး အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် ဆုလာဘ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်။ အားလုံးသော စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် Lotte Hotels & Resorts ၏ တစ်မူထူးခြားသော အမြင်ရှုထောင့်အရဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း၏ အဖွဲ့ဝင်များအား အကာအကွယ်ပေးရန် ဆောင်ရွက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ LOTTE Hotels & Resorts သည် ဤအစီအစဉ်၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ သတ်မှတ်ချက်များ၊ အထူး အကျိုးအမြတ် ခံစားခွင့်များ၊ သို့မဟုတ် အစီအစဉ်နှင့် ဆက်နွယ်သည့် ဆုကြေးများ အစရှိသည်တို့အား လုပ်ငန်းအတွင်းပိုင်း အခြေအနေများအရ သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် Lotte Hotels & Resorts သို့မဟုတ် ၎င်း၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ တို့နှင့်ပတ်သက်သည့် အပြောင်းအလဲများအရ သော်လည်းကောင်း လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိထားပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ဤအစီအစဉ်မှာ Lotte Hotels & Resort ရှိ အခွင့်ထူးခံ ဆုချီးမြှင့်ပေးမှု အစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး ဤစည်းကမ်းများအောက်တွင် ညွှန်းဆိုမထားသော အခွင့်ထူးခံ ဆုလာဘ်ပေးမှု ကန့်သတ်ချက်များသည် အခွင့်ထူးခံ ဆုလာဘ်ပေးမှု အစီအစဉ်၏ စည်းကမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များအောက်တွင် အကျုံးဝင်စေရမည်။
1. ဤအစီအစဉ်သည် Lotte Hotels & Resorts’ Lotte Hotel ဘွတ်ကာကလပ် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဆုလာဘ်ပေး အစီအစဉ်နှင့် ဟိုတယ်များနှင့် အပန်းဖြေနေရာများကို အသုံးပြုချိန်တွင် ပေးအပ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များထံ ပေးအပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အညီ ရေးသားထားသည့် အထူး အကျိုးခံစားခွင့်များအတွက် ဖြစ်ပါသည်။
3. Lotte Hotels & Resorts ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ နယ်ပယ် အတိုင်းအတာသည် အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဖြစ်ပါသည်။
② Lotte Hotels & Resorts (ဆိုး(လ်) (Seoul)၊ World (Seoul Jamsil) ၊ ဘူဆန် (Busan) ၊ ဂျေဂျူ (Jeju) ၊ အူလ်စန် (Ulsan)၊ ဟနွိုင်း (Hanoi) ၊ Legend Saigon ၊ ဂွမ် (Guam)၊ မော်စကို (Moscow) ၊စိန့်ပီတာဘတ် (Saint Petersburg) ၊ (Vladivostok) ရန်ကုန်)
③ L7 Hotels ဟိုတယ် (Myeongdong ၊ Gangnam ၊ Hongdae)
④ Lotte City Hotels ဟိုတယ် (Gimpo လေဆိပ်၊ Seoul Guro, Seoul, Mapo, Seoul, Myeongdong, Daejeon, Jeju, Ulsan)
⑥ အနာဂတ်တွင် ဆက်လက် ဖွင့်လှစ်သွားမည့် အခြား Lotte Hotels & Resorts များ
ဤဝန်ဆောင်မှုအား ကမ်းလှမ်းမထားသော နေရာမှာ- Lotte Hotel New York Palace, Lotte Hotel Vladivostok, Lotte Hotel Samara, Lotte City Hotel Tashkent Palace, Lotte City Hotel Kinshicho, Lotte Resort Jeju, Lotte Resort Sokcho, နှင့် Lotte Resort Buyeo.
6. လုပ်ငန်းအတွင်းပိုင်း အခြေအနေများအရ သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် အင်တာနက် Lotte Hotels & Resorts သို့မဟုတ် ၎င်း၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အပြောင်းအလဲများအရ သော်လည်းကောင်း အဖွဲ့ဝင်များအတွက် အထူးအခွင့်အရေးများနှင့် အထူး အကျိုးအမြတ်ခံစားခွင့်များ၊ ထို့ပြင် B ရမှတ် စနစ်တို့အား အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ကောင်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အဆိုပါ အပြောင်းအလဲများအား လိုအပ်သလို အသိအမှတ်ပြုသွားမည်။ အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ရသည့် အကြောင်းအရင်းနှင့် ၎င်းပြောင်းလဲလိုက်သော အချက်အလက်များအား ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းများထဲမှ အနည်းဆုံး နှစ်နည်းဖြင့် အဖွဲ့ဝင်များထံသို့ ကြိုတင်အသိပေး အကြောင်းကြားပါမည်၊ နည်းလမ်းများမှာ- ဝဘ်ဆိုဒ်၊ ရေးသားသတိပေးချက် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်တို့ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပူးတွဲပါတနာ ဆောင်ရွက်မှုအတွင်း မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း၏ တစ်ဖက်သက် ပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ် ဘဏ်ဒေဝါလီခံရမှု၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များ၊ သို့မဟုတ် စီးပွားရေး ဝန်းကျင်အခြေအနေ ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲမှုများ အစရှိသည်တို့ကဲ့သော အကြောင်းအရင်းများကြောင့် အပြောင်းအလဲများအား ရှောင်လွှဲ၍ မရနိုင်သည့် အခြေအနေများတွင်မူ ၎င်းအခြေအနေ ကျော်လွန်သွားပြီးသည့် နောက်မှသာ အဖွဲ့ဝင်များထံသို့ အသိပေးမှု ပြုလုပ်ကောင်း ပြုလုပ်နိုင်ပေမည်။ အဖွဲ့ဝင်များသည် အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်မှု အကြောင်းကြားချက်အား လက်ခံရရှိပြီးသည့်နောက် 1 လ အတွင်း မည်သည့် ကန့်ကွက်မှုများကိုမျှ တင်ပြလာခဲ့ခြင်း မရှိပါလျှင် ဤပြောင်းလဲလိုက်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နှင့် ကန့်သတ်ချက်များအား သဘောတူညီချက်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်မည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နှင့် ကန့်သတ်ချက်များတွင် ပြောင်းလဲမှုများအား သဘောတူလက်ခံခြင်း မရှိသော အဖွဲ့ဝင်များအနေနှင့်ဖြင့် ၎င်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ကန့်သတ်ချက်များအား ပြောင်းလဲမှုပြုသည့် ရက်စွဲမှစ၍ 1 နှစ်တာအတွင်း ၎င်းတို့၏ ရှိနေဆဲဖြစ်သော P ရမှတ်များအား ဆက်လက် အသုံးပြုကောင်း အသုံးပြုနိုင်မည်။ ဤထုတ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ် အဆုံးသတ်ပြီးသည့် နောက်တွင် ကျန်ရှိနေသော P ရမှတ်များ မှန်သမျှသည် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားမည်။
7. Lotte Hotels & Resorts သည် ဤအစီအစဉ်အား ရပ်စဲခဲ့ပါလျှင် ၎င်းသည် အဖွဲ့ဝင်ဆိုင်ရာ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် နှင့် ဟိုတယ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တို့ အပေါ်တွင် ဖျက်သိမ်းမှုမပြုမီ အနည်းဆုံ6းလ ကြိုတင်ပြီး ထုတ်ပြန်ကြေညာမှု ပြုရမည်။ အနည်းဆုံးဖြင့် အဖွဲ့ဝင်များထံသို့ အီးမေးလ် 1 စောင်ပေးပို့ပြီး၊ ဤအချက်အလက်အား ၎င်းတို့ထံသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားရပေမည်။
11. ဤအစီအစဉ်တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပူးပေါင်းထားသော တစ်ဦးချင်းစီ၏ ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်သည် အစီအစဉ်တွင် အဖွဲ့ဝင်၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုကို ကန့်သတ်ခြင်း သို့မဟုတ် တားမြစ်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပေသည်။ အဖွဲ့ဝင်များသည် ၎င်းတို့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးသော ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဉ်းများနှင့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိပေသည်။ အစီအစဉ်၏ အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုမှာ ကုမ္ပဏီ၏ ကျင့်ဝတ်နှင့်မလျော်ညီပါက သက်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်ချိုးဖောက်မှုအတွက် အဖွဲ့ဝင်ထံတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ ဤသဘောတူညီချက်၏ စည်းကမ်းများနှင့်အခြေအနေများအပါအဝင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှု စည်းမျဉ်းများနှင့်အခြေအနေများအား သဘောတူခြင်းဖြင့် အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ရေး အဖွဲ့ဝင်များသည် ၎င်းတို့ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်ထံမှခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်သည် ဥပဒေဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများကိုဖြစ်စေနိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ၏စည်းကမ်းများအားဆန့်ကျင်ချိုးဖောက်သော မည်သည့် လုပ်ရပ်မဆို ကျူးလွန်မိသည့်အခါ ကုန်ကျစရိတ်၊ ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် အခြား ဥပဒေဆိုင်ရာ ဝတ္တရားအပါအဝင် တာဝန်ခံမှုအားလုံးမှ ကင်းလွတ်ချန်လှန်ထားရန် Lotte Hotels & Resorts နှင့် အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သော ကုမ္ပဏီများက သဘောတူညီပါသည်။
12. Lotte Hotels & Resorts သည် ၏သဘောတူညီချက်ပါ အပုဒ်2ပိုဒ်ခွဲ 1 တွင်ညွှန်းဆိုထားသည့်အတိုင်း အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှု သတ်မှတ်ချက်နှင့် မပြည့်မီသော မည်သူမဆိုအား အဖွဲ့ပေးဝင်ရန် ငြင်းပယ်ခွင့်ကိုသီးသန့်ထားရှိပြီး အဖွဲ့ဝင်အရည်အချင်း ပြည့်မီမှုမရှိတော့သောသူများအား အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် တရားမျှတမှုမရှိသောနည်းလမ်းဖြင့် ရရှိခဲ့သည့် ရမှတ်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များအတွက် ပေးချေမှုကို ဆိုင်းငံ့နိုင်သလို ဥပဒေကြောင်းအရ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးဆုံးပြီးနောက် ထိုရမှတ်များကို တောင်းခံနိုင်ပေသည်။
1. အဖွဲ့ဝင်များသည် အမျိုးမျိုးသော အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ အထူး အစီအစဉ်များ နှင့် ရရှိထားသော B ရမှတ်များ အစရှိသည်တို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး Lotte Hotels & Resorts ထံသို့ မေးမြန်း၊ စုံစမ်းမှုပြုနိုင်သော အခွင့်အရေးအား ရရှိထားပြီး၊ Lotte Hotels & Resorts သည်လည်း အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အပြောင်းအလဲများ၊ အသုံးဝင်သော ဟိုတယ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် အဖွဲ့ဝင် ရရှိသော B ရမှတ်များ အစရှိသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များကို ၎င်းတို့ သင့်တော်သည်ဟု ယူဆသော နည်းလမ်းများအသုံးပြု၍ အဖွဲ့ဝင်ထံသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားမှု ပြုကောင်းပြုပါမည်။ သို့သော် အဖွဲ့ဝင်များသည် အီးမေးလ်များသို့မဟုတ် စာတိုများလက်ခံရရှိခြင်း ကိုသဘောမတူလျှင် Lotte Hotels & Resorts သည် ပျောက်ဆုံးသွားသော သို့မဟုတ် ကြန့်ကြာနေသည့် စာကြောင့်ဖြစ်သော မည်သည့် အားနည်းချက်မဆိုအတွက် တာဝန်ဝတ္တရားမရှိပါ။
2. အဖွဲ့ဝင်မှပါဝင်သော ကုမ္ပဏီ၏ လိပ်စာ သို့မဟုတ် အခြားသော အချက်အလက်များတွင် အပြောင်းအလဲများ ပြုလုပ်ရမည်ဆိုလျှင် အဖွဲ့ဝင်များသည် Lotte Hotels & Resorts သို့ အကြောင်းကြားရန် တာဝန်ရှိသည်။ အဖွဲ့ဝင်များသည် အဆိုပါ အချက်အလက်အား အကြောင်းကြားရန် ဖြစ်စေ အချက်အလက်ပြောင်းလဲမှုကို အသိပေးရန်ဖြစ်စေ ၎င်းတို့၏ ပျက်ကွက်မှုကြောင့် ၎င်းတို့ တွေ့ကြုံရသော ဆုံးရှုံးမှုများ တစ်စုံတစ်ရာအတွက် ၎င်းအဖွဲ့ဝင်ထံ၌သာလျှင် တာဝန်ရှိမည်။ ၎င်းအပြင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် ခွင့်ရက်သို့မဟုတ် အခြားအကြောင်းကြောင်းကြောင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ ကုမ္ပဏီနှင့် မိတ်ဖက်မှု မရှိတော့သည့်အခါ ကော်ပိုရိတ် စာချုပ်ဝန်ဆောင်ကြေး အပါအဝင် ၎င်းတို့၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှု အရည်အချင်းများအား ကန့်သတ်သွားမည်။ Lotte Hotels & Resorts သည် မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတဆင့် ဘွတ်ကာ ကလပ် အဖွဲ့ဝင်၏ အလုပ်အကိုင်ကို စစ်ဆေးခွင့် သီးသန့်ထားရှိပါသည်။
3. B ရမှတ်များသည် ၎င်းတို့အား ရရှိပြီးချိန်မှ3နှစ် ပြည့်ပြီးနောက်တွင် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည်။ သို့သော်လည်း အဖွဲ့ဝင်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးသည် ၎င်းအဖွဲ့ဝင် နှုတ်ထွက်သွားသည့်အထိ ဆက်လက် သက်ရောက်မှု ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး၊ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူသည် Lotte Hotels & Resorts ကြောင့်ဟု မယူဆနိုင်သော အကြောင်းအရင်းများကြောင့် နှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါလျှင် ရမှတ်ယူမှုပြုချိန်အထိ ၎င်း၏ အသုံးမပြုရသေးသော ရမှတ်များ အားလုံးသည် ၎င်းနှုတ်ထွက်မှု သက်ရောက်မှုရှိသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည်။ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးဖြစ်သော ရမှတ်များအား ပြန်လည် ရယူ၍ မရနိုင်ပေ၊ ထို့ပြင် ၎င်းတို့သည် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အသုံးပြုရန်အတွက် ရရှိနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပေ။ သို့သော်လည်း အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် အခွင့်ထူး ဆုလာဘ်ပေးမှု အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခြင်းကို ထိန်းသိမ်းထားသည့်အခါအခွင့်ထူးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခြင်းမှ မရပ်စဲမချင်း ဝန်ဆောင် ပံ့ပိုးမှုအတွက် ပေးအပ်ထားသည့် အဖွဲ့ဝင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ကို ထိန်းသိမ်းထားရှိသွားမည်။
4. အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် အဖွဲ့ဝင် အထူးအကျိုးခံစားခွင့်များ၊ ဘွတ်ကာ ဗောက်ချာများ အစရှိသည်တို့အား တရားဝင် အကြောင်းအရင်းမရှိဘဲ ရောင်းချခြင်း ကဲ့သို့သော အပြုအမူများဖြင့် ဤအစီအစဉ်၏ စည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ချက်များအား ချိုးဖောက်ခဲ့ပါလျှင် သို့မဟုတ် အခြားသော ဥပဒေများ၊ ပြဌာန်းချက်များ အစရှိသည်တို့ကို ချိုးဖောက်သည့် ဥပဒေမဲ့ အပြုအမူများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါလျှင် Lotte Hotels & Resorts သည် အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်၏ အခွင့်အရေးများအား ဖျက်သိမ်းကောင်း ဖျက်သိမ်းနိုင်ပေသည်။
4. အဖွဲ့ဝင်ကိုယ်တိုင်မှ Lotte Hotels & Resorts တွင် ကြိုတင်မှာယူမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီး ဘွတ်ကာကလပ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှသာလျှင် ရမှတ်များကို စုဆောင်းနိုင်သည်။ စုဆောင်းမှုကို အရည်အချင်းမပြည့်မီသော နှုန်းထားများဖြစ်သည့် ကောက်ခံကြေးများအတွက် ကန့်သတ်ထားကောင်း ကန့်သတ်ထားနိုင်ပါသည်။
5. ရမှတ်များစုဆောင်းရန်အလို့ငှာ သင်သည် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အခန်းကြိုတင်မှာယူမှုနှင့် Lotte Hotels & Resorts ၌ကျွေးမွေးဧည့်ခံမှု ပွဲအစီအစဉ်များ မှာယူမှုအတွက် ငွေပေးချေထားသော အထောက်အထားရှိရမည်ဖြစ်သည်။ စာရင်းသွင်းထားသော အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး မဖြစ်လာသေးမီ ပြုလုပ်ခဲ့သော ဝယ်ယူမှုများအတွက် ရမှတ်များအား ဆုချီးမြှင့်မည် မဟုတ်ပေ။
⑨ အဖွဲ့ဝင်ကြေးများနှင့် ကဒ်သည် Lotte Hotels & Resorts တွင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုအားဖြင့် စီမံလည်ပတ်သော အထူး အစီအစဉ်များ အားလုံးအား ဝယ်ယူပေးသည်၊ ဤတွင် ကိုယ်လက်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး စင်တာနှင့် Trevi ကလပ် ကဲ့သို့ အစီအစဉ်များ ပါဝင်ပြီး၊ ဟိုတယ် လက်ဆောင် အသိအမှတ်ပြုလွှာများ၊ ဘူဖေး လက်မှတ်များနှင့် အခြားသော ဗောက်ချာများ အတွက် ပမာဏများ ဝယ်ယူသည်။
12. အောက်ပါဟိုတယ်များ၌ တည်းခိုမှုဖြစ်စေ ကျွေးမွေးဧည့်ခံပွဲများအတွက်ဖြစ်စေ ငွေပေးချေပြီးနောက် ရမှတ်များကို စုဆောင်းပေးပါသည်။ Signiel (Seoul ၊ Busan) ၊ Lotte Hotels & Resorts (ဆိုး(လ်) (Seoul)၊ World (Jamsil Seoul ) ၊ ဘူဆန် (Busan) ၊ ဂျေဂျူ (Jeju) ၊ အူလ်စန် (Ulsan)၊ ဟနွိုင်း (Hanoi) ၊ Legend Saigon ၊ ဂွမ် (Guam)၊ မော်စကို (Moscow) ၊ Saint Petersburg (စိန့်ပီတာဘတ်) ၊ (Vladivostok) ၊ ၊ရန်ကုန်)၊ L7 ဟိုတယ် (Myeongdong ၊ Gangnam ၊ Hongdae) ၊ Lotte City ဟိုတယ် (Gimpo Airport ၊ Guro Seoul ၊ Mapo Seoul ၊ Myeongdong ၊ Daejeon ၊ Jeju ၊ Ulsan) နှင့် Lotte အပန်းဖြေစခန်းများ။ Lotte အခွန်အခမဲ့ ဆိုင်များ၊ နိုင်ငံရပ်ခြား တွဲဖက်ပါတနာ ဟိုတယ်များနှင့် အခြားသော မိတ်ဖက်ပြုထားသည့် စတိုးဆိုင်များ အစရှိသည်တို့တွင် ဝယ်ယူမှုများအတွက် ရမှတ်များအား စုဆောင်းသွားမည် မဟုတ်ပေ။
1. Lotte Hotels & Resorts သို့မဟုတ် Lotte အခွန် အခမဲ့ ဆိုင်များတွင် ဘွတ်ကာဗျောက်ချာတစ်ခုကို အသုံးပြုသည့်အခါ ဓါတ်ပုံပါသည့် ID တစ်ခုပြသရမည်ဖြစ်ပြီး ဗောက်ချာသုံးစွဲရသည့် သင့်၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဝန်ထမ်းထံ အသိပေးပါ။ ID ကတ်တစ်ခုအစား သင်၏ အခွင့်ထူး ကတ် (ယာယီကတ်၊ မိုဘိုင်း ကတ် သို့မဟုတ် ကတ်အမှန်) ကိုလည်း ပြသနိုင်ပေသည်။
2. အနည်းဆုံး ရမှတ် 1,000 (USD 10) အား စုးဆောင်းရရှိလာပြီဆိုလျှင် ဘွတ်ကာ ဗောက်ချာများအား Lotte Hotels & Resorts ရှိ အစားအသောက်များ နှင့် အဖျော်ယမကာများအတွက် အသုံးပြုကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပေသည်၊ ထို့ပြင် အနည်းဆုံး ရမှတ် 10,000 (USD 100) အား စုဆောင်းရရှိပြီးလျှင် Lotte အခွန် အခမဲ့ ဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူမှု ပြုလုပ်ကောင်း ပြုလုပ်နိုင်ပေမည်။ (အချို့သော အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ပစ္စည်းများအတွက် ကန့်သတ်ထားပေသည်)
4. အစားအသောက်နှင့် ဖျော်ရည်ယမကာများအတွက် ရမှတ်များနှင့် ဗောက်ချာများအား Lotte Hotels & Resorts လက်အောက်၌ တိုက်ရိုက် စီမံခန့်ခွဲသော စတိုးဆိုင်များတွင်သာလျှင် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာများသည် ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှု လက်အောက်မှ မဟုတ်သော စတိုင်းဆိုင်များမှ ဖြစ်လျှင် ရမှတ်များနှင့် ဗောက်ချာများအား အသုံးပြု၍ မရနိုင်ပေ။
5. ဤအစီအစဉ်မှတဆင့် ရရှိထားသည့် B ရမှတ်များကို တိုက်ရိုက်အသုံးမပြုနိုင်ပေ၊ သို့သော် ဘွတ်ကာ ဗောက်ချာ သို့မဟုတ် အခွင့်ထူး P ရမှတ်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး Lotte Hotels & Resorts ဖြစ်စေ Lotte အခွန်အခမဲ့ ဆိုင်များတွင်ဖြစ်စေ ငွေသားအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပေသည်။ အခွင့်ထူး P ရမှတ်များကို အခွင့်ထူး အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခြင်း သဘောတူညီချက်ပါ ပိုဒ်ခွဲ5အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် နည်းလမ်းများဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ပြောင်းလဲထားသည့် P ရမှတ်များကို ပြောင်းလဲပြီး တစ်နှစ်အကြာ ဒီဇင်ဘာလ 31 ရက်နေ့အထိ သုံးစွဲနိုင်ပေသည်။ ဘွတ်ကာ ဗောက်ချာကို အဖွဲ့ဝင်များကိုယ်တိုင်က မိမိတို့ပင်မစာမျက်နှာမှတဆင့် တိုက်ရိုက် လျှောက်ထားရမည်။ ဗောက်ချာတစ်ခုကို လျှောက်ထားသည့်အခါ အမျိုးအစား (ယူနစ်)၊ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှု နံပါတ်၊ အဖွဲ့ဝင် အမည်၊ နှင့်သုံးစွဲသူအမည်တို့ကို တိကျစွာဖော်ပြရမည်။
8. အဖွဲ့ဝင်များသည် အသုံးပြုသူတစ်ဦးအား ကြိုတင် သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့် ဗောက်ချာတစ်စောင်အား ထုတ်ပြန်ပေးရန် လျှောက်ထားကောင်း လျှောက်ထားနိုင်ပေမည်၊ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ဘွတ်ကာ ဗောက်ချာအား အလားတူ နည်းလမ်းဖြင့် နောက်ထပ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးရပေမည်။ ဘွတ်ကာ ဗောက်ချာအား ၎င်းဗောက်ချာပေါ်တွင် အမည်ဖော်ပြထားသည့် အသုံးပြုသူသာလျှင် အသုံးပြုနိုင်ပါမည်။ ဘွတ်ကာ ဗောက်ချာအား ထုတ်ပြန်ပေးပြီးသည့်နောက်တွင် ၎င်းအား သတ်မှတ်ထားသော အသုံးပြုမှု တည်နေရာ၌သာလျှင် အသုံးပြုနိုင်မည်။ အသုံးပြုမှု တည်နေရာသည် တွဲဖက်ပါတနာ ဟိုတယ်တစ်ခုတွင် ဖြစ်လျှင် ၎င်းအဖွဲ့ဝင်သည် ဗောက်ချာအား အသုံးပြုရန် ၎င်းတို့ဆန္ဒရှိသော အဆိုပါ ဟိုတယ်ထံသို့ အခန်းမှာယူမှုတစ်ခု တိုက်ရိုက် ပြုလုပ်ရမည်။ Lotte Hotels & Resorts သည် အသုံးပြုမည့် ဟိုတယ်များ ကြိုတင်မှာယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်မှန်သမျှအတွက် တာဝန်မယူပါ။
13. Lotte Hotels & Resorts ဖြင့်သက်ဆိုင်သော အမှားအယွင်းကြောင့် မဟုတ်သမျှ ကာလပတ်လုံး နုတ်ယူ၊ ဖြတ်တောက်ထားသော ရမှတ်များ သို့မဟုတ် အသုံးပြုပြီးသော ဗောက်ချာများအား ပြန်လည် ပေးအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်း ပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
14. Lotte Hotels & Resorts သည် ပျောက်ဆုံးသွားသော သို့မဟုတ် ခိုးယူခံရသော ဘွတ်ကာ ဗောက်ချာများအတွက် တာဝန်မယူပါ။
3. အဖွဲ့ဝင်များသည် Lotte Hotels & Resorts မှ ၎င်း၏ အဖွဲ့ဝင်များအတွက် ကမ်းလှမ်း ထောက်ပံ့ပေးထားသော အခြား အထူး အကျိုးအမြတ်ခံစားခွင့်များအား လက်ခံရရှိကောင်း ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ Lotte Hotels & Resorts သို့မဟုတ် ၎င်း၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းအတွင်းပိုင်း အခြေအနေများ သို့မဟုတ် အပြောင်းအလဲများအရ သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ၎င်းအခြေအနေပြီးနောက် သက်ရောက်မှု သော်လည်းကောင်း အားလုံးသော အထူး အကျိုးအမြတ်ခံစားခွင့်များနှင့် အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သက်ဆိုင်နေသည့် မိတ်ဖက် စတိုးဆိုင်များအား ပြောင်းလဲမှုပြုရန် လိုအပ်လျှင် အသိပေး အကြောင်းကြားချက်တစ်ခု ပြုလုပ်မှုနှင့်အတူ အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပေသည်။
4. ဤအစီအစဉ်၏ အထူးအကျိုးခံစားခွင့်များကို လက်ခံရရှိရန် ကြိုတင်မှာယူမှုတစ်ခုပြုလုပ်သည့်အခါ သင်၏ ဘွတ်ကာ ကလပ် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုအား Lotte Hotels & Resorts ထံသို့ အကြောင်းကြားပါ။
※ မပါဝင်သောဟိုတယ်များ - LOTTE HOTEL SEATTLE, LOTTE NEW YORK PALACE, LOTTE HOTEL SAMARA / LOTTE City Hotel Tashkent Palace / LOTTE RESORT BUYEO, LOTTE RESORT JEJU, LOTTE RESORT SOKCHO